Şanlıurfa chọrọ nkwakọ ngwaahịa site na Nleta Oge Ihu | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyAla nke Anatolia Region63 SanliurfaŞanlıurfa Na-achọ Azụmahịa Site Winter njem
02 / 02 / 2015 63 Sanliurfa, Ala nke Anatolia Region, General, TELPHER
Şanlıurfa chọrọ nkwakọba site na njem nlegharị n’oge oyi: Ọrụ amalitela iwu ebe obibi, oche gafere na okporo ụzọ ọhụụ na Karacada the, naanị skai etiti nke Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Anatolia.
Turkey, nke bụ otu n'ime ndị kasị sie obodo Şanlıurfa, chọrọ iso na na oyi na skai eme na dunyere Karacadağ njem.
Ebe a na-akọwa 45 elu Karacadağ Ski Center, nke a kọwara dị ka da Uludağı nke ndịda Ebe Ndịda Ọwụwa Anyanwụ amongwa n'etiti ndị mmadụ nọ na anya nke 1919 kilomita site na etiti Siverek, ndị mpaghara na-ahọrọ karịa.
Offọdụ n'ime ndị na-abịa na etiti ahụ, ebe a na-ahụ oke ike ọkachasị na semesters na ngwụsị izu, na-enwe ọfụma na-ete n’elu mkpuchi dị ọcha, ebe ndị ọzọ na-ebelata nchekasị site na ịcha ọkụ brazier na ikuku ọhụrụ.
Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman na Adıyaman, dịka ndị ọbịa nke ụbọchị, etiti etiti, ndị hụrụ egwuregwu sọọsọ nwere ike ịnabata n'abalị ka ha rụọ ọrụ n'ime ihe owuwu ahụ.
Şanlıurfa urfa Metropolitan Municipal, oru ngo nke ulo obibi doziri, ga-ewulite sk na okporo ụzọ ọhụụ. Na mmecha akwukwo a, ana akpo Karacadağ inweta ihe ndi ozo site na njem ya ma buru kwa mpaghara nleta nke mpaghara.
"Ha ga-ekpori ndụ ma nwee ohere mara omenala obodo a nke ọma"
Gọvanọ Siverek Hamza Erkal, onye nta akụkọ AA kwuru na ndị isi obodo Sanli urfa na-arụ ọrụ na etiti ahụ, o kwuru.
Erkal kwuru na oru ngo a ga - eme ebe ndozi na oche oche nye mpaghara a, na ọ ga - agbatị ma mezie okporo ụzọ ahụ.
Erkal kwukwara, ndị mmadụ na-abịa na mpaghara ahụ ga-anọrị ma kporie ma sigharị, yana ohere iji mara ọdịbendị mpaghara ahụ.
N'imesi ike na ndị mmadụ ga-ahọrọ Karacadağ Ski Center ka ha nọrọ na ngwụsị izu ahụ ebe a ga-arụ ụlọ, Ekral kwuru:
Ac Karacadağ Ski Center nwere ike ịghọ ebe etiti na-adọrọ adọrọ dịka Uludağ na Kartepe n'ọdịnihu. Ndị mmadụ na-abịa ebe a, ma ọ bụrụ na ha si mpaghara ndị ọzọ, ọ kachasị site na Adana, Mersin na Hatay, etiti ahụ ga-abịa dị ndụ. Na mgbakwunye, ndị njem obodo na ndị si mba ọzọ na-abịa n'ógbè ahụ ga-enwe ohere iji hụ ọdịnala nke nọrọla ọtụtụ afọ. N'aka nke ozo, mpaghara Karacadağ bu ebe nkpuru osisi na osisi di egwu. Ha ga-enwe ohere inyocha osisi ndị mara mma ma detụ ngwaahịa okike. ”
KARSOD President Özer, Anyị nwere Olileanya nke Winter njem
Şanlıurfalılar chọrọ ịzụ ngwa ngwa
TCDD Mürşitpınar-Şanlıurfa Railway Project Inyocha, injinia na ndụmọdụ…
Uludag nke Ndịda Ọwụwa Anyanwụ
Na-eri nri ọ bụla na izu ụka n'ozuzu na obi ụtọ
Ọchịchọ ski ski na Palandökende mụbara
TCDD Mürşitpınar - Şanlıurfa ilgbọ okporo vezọ Railway Project
TCDD Mürşitpınar Şanlıurfa Railway Project Surveing ​​- project - engineering and…
A na-emesị mee Sanliurfa Metrobus tender
Esi mara nrọ nke Şanlıurfa Rail System